फेरि लक-डाउन ! के-के छन नियमहरु ?
काठमाडौं : सरकारले जारी निषे’धाज्ञा ‘मो’डालिटी’मा केही परिवर्तन गरी ‘लुज’डाउन’ शैली अपनाउने तयारी थालेको छ । दोस्रो च’रणको कोरो’ना सं’क्रमण सुरु भएपछि गत १६
वैशाखबाट जारी निषे’धाज्ञाको ‘मोडा-लिटी’ सर्वसा’धारणको दैनिकी र जनजीवन सहज बनाउनेगरी जारी राख्ने तयारी गरिएको हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार सोमबार साँझसम्म देशका ७७ जिल्लामध्ये ७५ जिल्लामा निषे’धाज्ञा छ ।
खोटाङ र मनाङमा भने निषे’धाज्ञा छैन । पछिल्लोपटक काठमाडौं उपत्यकामा ३१ जेठसम्म निषे’धाज्ञा तोकिएको छ । गृह मन्त्रालय प्रवक्ता जनकराज दाहालले अब निषे’धाज्ञा शैलीमा दैनिक जनजीवन सहज बनाउनेगरी परिमा’र्जन गरिने जानकारी दिएका छन् ।
‘निषे’धाज्ञा अहिले तत्काल हट्दैन, तर मोडा’लिटीमा परिवर्तन गरिन्छ, अब निषेधा’ज्ञा लुज’डाउन शैलीमा जनजीवन सहज बनाउनेगरी अझै केही समय जारी रहन्छ,’ गृह प्रवक्ता दाहालले सोमबार राजधानीसँग भने ।
गृह मन्त्रालयले यो शैली अवस्था हेरेर अघि बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देश’नसमेत गरिसकेको छ । जिल्लास्थित डीसीएमसीले जिल्लाको अवस्था हेरेर सोबारे निर्णय लिन सक्नेछन् ।
गृह प्रवक्ता दाहालका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट प्रा’प्त रायका आधारमा नै यस्तो शैली अ’पनाउन लागिएको हो । यो शैलीअ|न्तर्गत निर्माण, उत्पादनजन्य, कृषि कार्य खुला गर्ने सरकारको तयारी छ ।
वर्षयाम सुरु भएपछि कृषि कार्यलाई समेत खुला गर्न सरकारले निषे’धाज्ञा ‘मोडालिटी’मा परिवर्तन गर्न लागेको हो । तर, विद्यालय, कलेज, होटल व्यवसाय, पार्टी प्या’लेस, सपिङ मलसहितका भी’डभाड हुने क्षेत्र भने तत्काल खुल्ने छैनन् । -राजधानी दैनिकबाट
२०७८ जेष्ठ २५, मंगलवार २१:१२ गते 1 Minute 1119 Views